जीवनशैली- हाम्रो खबर जीवनशैली – हाम्रो खबर
भागेर काठमाडौं छिरेकी अञ्जली अधिकारी काठमाडौमा यस्तो सम्म गर्न बाध्य भइन ,उनको संघर्षको कथा; हेर्नुहोस
2021, April 1st, Thursday
अञ्जली अधिकारी बर्दियाको मैना पोखरी स्कुलमा पढ्ने गर्थिन् । त्यति बेलाको समयमा बर्दियामा महोत्सव आयोजना हुने कुरा आयो ।उक्त महोत्सवमा बद्री पंगेनी, शङ्कर बिसी, पशुपति शर्मा लगायतका कलाकारहरू उपस्थित भएका थिए । सानै देखी नाच्न भनेपछी हुरुक्कै हुने अञ्जली अधिकारी
काठमाडौं । प्रतिकुलतालाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्न सक्ने मानिसहरु कमै हुन्छन् । त्यसका एउटा मूर्त उदाहरण हुन्, पोखरा लह चोकका २४ वर्षीय सुजन थापा मगर । कुरा आजभन्दा करिब ८ वर्ष अघिको हो । टेलिभिजन र फिल्ममा देखिने कालाजादुबाट प्रभावित
रामकुमारी झाक्री टिकटकमा यसरी रमाउदै ! अहिले सम्मकै कडा टिकटक (भिडियो सहित)
2021, March 18th, Thursday
रामकुमारी झाँक्री वा,मपन्थी युवा नेतृ हुन्। उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष भैसकेकी छन्। उनको जन्म २०३४ सालमा गुल्मीको मयाल पोखरी गाविस १ रत्नबहादुर र रनकुमारीकी छोरीका रूपमा भएको हो।” “उनले
हिमानीले पारसलाइ माफी दिइन “पारस सगको फोटो राख्दै लेखिन यस्तो भाबुक स्टाटस”
2021, February 24th, Wednesday
काठमाडौ । पूर्व रानी कोमल”शाहको जन्मदिनमा पूर्वयुवराज पारस शाह पनि सहभागी भएको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । नेपालमै भएपनि पूर्वयुवराज” पारस परिवारका साथमा छैनन् । उनी एक्लै वस्दै आएका छन् ।” “पत्नी हिमानीसंग पनि उनको सम्बन्ध सुमधुर
पैसाको लागि आफ्नै दिदी भिनाजुले ४० लाख दिएर भाईको परिवार नै सिध्याउने योजना ! योजना यसरी भयो असफल (भिडियो) हेर्नुस् ।
2021, February 14th, Sunday
काठमाडौ । सिन्धुलीका कृष्णहरी खड्का अहिले काठमाडौको कपनमा बस्छन् । २०६७ सालमा वुवाको निधन भयो । परिवारमा तीन दिदी बहिनी र एक भाई थिए । भाई काठमाडौमा पढाईको सिलसिलामा थिए । सिन्धुलीमा रहेकी एक युवतीसंग भाईको प्रेम थियो । उनको
सामाजिक अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौलाले भ्यालेन्टाईनमा गरिन् प्रेमी सार्वजनिक ! को हुन त उनको प्रेमी? हेर्नुहोस
काठमाडौं ।सामाजिक संजाल होस् या फिल्डमा होस् सत्यतथ्य सहित खह्रो रुपले लेख्ने,बोल्ने साथै समाजमा भएका अनेकौं पिडित तथा बन्दै गरेका योजनाहरुलाई अभियान र व्यक्तिगत तर्फबाट समाजसेवा गर्दै आएकी सामाजिक अभियन्ता ज्वाला संग्रौलाले प्रणय दिवसको अवसरमा मिठा शब्दहरु लेख्दै प्रेमी सार्वजनिक
यी नै व्यक्ति हुन, जो सग गायिका अँन्जु पन्त बिवाह गर्दैछिन्।यी को हुन? र कहिलै हुँदै छ त बहे? हेर्नुहोस…
2021, January 31st, Sunday
काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिने भएकी छिन् । ‘कलाकर्मी डट कम’ का अनुसार अञ्जुले थीर कोइरालासँग विवाह गर्न लागेकी हुन् । यो उनको दोस्रो विवाह हुनेछ । गायिका पन्त छोरी परितोशिकाको आग्रहका कारण विवाहका लागि तयार
घरमा कोही मानिस आँउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई हतार हतार लुकाइन्थ्यो ! – रमेश प्रसाई (हेर्नुहोस यो भावुक भिडियो )
करोडौं नेपाली जनता’ले रुचाएका प्रखर वक्ता रमेश प्रसा’ईको जन्म नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा बि.सं. २०५० सालमा भएको हो । उनका बुवा आ’मा दुवै जना शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । त्यसैले त होला उनी सानै देखि चेतन’सिल थिए । दुवै आँखा नभएका
गायक दुर्गेश थापाले श्रीमती लुकाउनुको रहस्य यस्तो रहेछ ! हेर्नुहोस
2021, January 28th, Thursday
गायक दुर्गेश थापा छोराको बुवा बनेका छन् र यहि खुशियाली साट्दै आफ्नो विवाह भएको समेत दर्शक सामू खुलाएका छन् । श्रीमती प्राची लामाको नाम सहित आफ्नो छोराको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् । दु,र्गेश थापाले किन श्रीमती,लाई आज सम्म लुकाएर राखे
काठमाडौँ फर्किए रमेश र नन्दा ! विमानस्थलमा र बाल आश्रम यसरी गरियो भब्य स्वागत (भिडियो सहित​) हेर्नुहोस…
काठमाडौँ । धाराप्रवाह रुपमा तथ्य सहित बोल्न सक्ने क्षमताका धनी ब्यक्तित्व रमेश प्रसाईको पछिल्लो परिचय हो गायक। रिगंकेबुगंको राँगो गाए लगत्तै विबाह गरेका रमेश अहिले ट्रेण्डिगंमा नै रहेका बेला रमेश र नन्दा धरानबाट काठमाडौँ फर्किएका छन्। रमेश र नन्दाले विबाहपछि
“ओलीको, एउटै बोलीले, सम्मान लिने, दिने दुवैलाई, ल’ज्जीत बनायो”
“राजनितीमा, नाटकिय खेल ,तत्काल, संसद विघठन, गर्दै देउवा चुहियो, गोप्य सुचना “
“अनमोल केसी र केकी अधिकारी ,पनि राष्ट्रपति,मार्फत विभूषित हुने”
“प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको, मिलेमतोमा संविधानलाई, धुजाधुजा पारियोः डा.रामवरण यादव,
“मन्त्री र सांसदहरुले, संविधानलाई कालो, दिवसको रुपमा मानाउनु, अनैतिकताको पराकाष्ठः भीम रावल,
“ओली विरुद्ध हात, धोएर लागेकी रामकुमारी, झाँक्री सार्वजनिक मंचमा दिउँसै घुरेर ,निदाए पछि.. (भिडियो सहित ),
“परमादेश बाट प्रधानमन्त्री ,बनाइदिने चोलेन्द्र, शमशेरको गुन, यसरी तिर देउवाले,
“प्रचण्डपत्नी सीता,लाई, प्रसिद्ध प्रबल,जनसेवाश्री प्रदान गरिने”
“छोरी लिएर बस्ने श्रीमान, श्रीमतीले यस्तो सहमती गरेर मिलन गरे, बुबा आमा मिल्दा, छोराछोरीको खुसिले आखा बाट आ,शु झारे (भिडियो सहित)”
“नेपाल’को ईतिहासमा, यो भन्दा असफल सरकार मैले देखेको छैनः कृष्णभक्त पोखरेल
“एमालेभन्दा ठूलो पार्टी, बनाउन सकिएन भने राजनीतिबाट, सन्यास लिन्छुँ : विरोध खतिवडा”
“करिश्मा मानन्धरको, जिद्धी- ‘केपी ओलीज्यूले, नै फोन, गर्नुभएको हो, मैले,गरेको होइन’
( 2021, September 20th, Monday)
( 2021, September 19th, Sunday)